umphakeli wephrofayili ye-aluminium nomkhiqizi --fscyal.com
Thumela uphenyo noma usithumelele i-imeyili ukungitshela izidingo, sizokwenzela yona ngokwezifiso. Incazelo yemikhiqizo: 1 Uhlobo lwebhizinisi Umkhiqizi 2 Okujwayelekile: GB 5237-2008; EN755, njll., 3 Uchungechunge lomkhiqizo: Iphrofayili ye-Aluminium yokwakha nezinto zokwakha. 4 Intengo: Ngokuya ngentengo yeNanhai Aluminium Ingot(http://www.lvdingjia.com/)…
Iphrofayili ye-Aluminium yethubhu ye-aluminium Thumela uphenyo noma usithumelele i-imeyili ukungitshela izidingo, sizokwenzela yona ngokwezifiso. Aluminium tube uhlobo non-ayoni lensimbi tube. Kushiwo into yensimbi eyizigaxa eyisigaxa futhi eyelulwe ngobude bayo be-longitudinal nge…
Ukwethulwa kwephrofayili ye-Aluminium yomnyango & iwindi Thumela uphenyo noma usithumelele i-imeyili ukungitshela izidingo, sizokwenzela yona ngokwezifiso. IChangYuan Aluminium ingenza ngezifiso lonke uhlobo lomnyango &iphrofayli lewindi le-aluminium emakethe yaphesheya, kusuka esigayweni kuqediwe ku-anodizing, i-electrophoresis ne…